बेलायतले नेपाललाई यात्राको रातो सूचीबाट हटायो
बेलायतले नेपाललाई यात्राको रातो सूचीबाट हटाएको छ। कोरोना महामारी बढ्दो क्रमसँगै बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि केही प्रतिबन्धसहित विभिन्न देशलाई रातो सूचिमा राख्दै आएको थियो। बेलायतका यातायात मन्त्री ग्रान्ट सापले बिहीबार ट्वीटरमार्फत यात्रा सूचीको पुनरावलोकन गर्दै नेपाललगायत ४७ वटा देशलाई रातो सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक गर्नु भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। यो निर्णय अक्टोवर ११ […]
२०७८ अशोज २२, शुक्रबार २०७८ अशोज २२, शुक्रबार by मेट्रो न्यूज खबर
काठमाडाैं । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय इन्द्रसरोवरको सतह बढेपछि कुलेखानी खोला वरपरका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। जलाशय क्षेत्रमा भइरहेको वर्षाका कारण आइतबार मध्याह्नबाट जलाशयको सतह बढेर समुद्री सतहबाट एक हजार ५२९ दशमलव ९५ मिटर पुगेको छ। पानीको सतह बढेसँगै बढी भएको पानी ड्याम्पसँगै रहेको द्वारबाट जाने क्रम सुरु भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। […]
नेपाली प्राचीन इतिहासका अनेक किंवदन्ती बोकेर बाँचिरहेको छ– इन्द्रचोक । काठमाडौंको मायावी चरित्रलाई इन्द्रचोकसँग जोडिएका पुरातात्त्विक कथाहरूले अझै रहस्यमय बनाइदिएका छन् । भनिन्छ– ‘काठमाडौं’ नाम ‘काष्ठमण्डप’ बाट अपभ्रंस भएर बनेको हो । यसको स्रोत काष्ठमण्डप जीवितै छ । ०७२ को भूकम्पमा यो सम्पदा ढल्यो, अहिले ठड्याइएको छ । तर, ‘काठमाडौं’ हुनुअघि यस सहरको नाम ‘कान्तिपुर’ थियो । ‘कान्तिपुर’ नै सहरको पहिचान […]
२०७८ भदौ २९, मङ्लबार २०७८ भदौ २९, मङ्लबार by सुरेश किरण
नेवारले मात्रै पढ्ने र बोल्ने हो र नेपालभाषा ?
साउनको महिना। हरिया चुरापोते किन्न मानिसहरुको भिड लाग्छ काठमाडौंको इन्द्रचोकमा। आकाश भैरव अघि रहेको ‘इन्द्रचोक कश्मिरी बजार’ बिहानैदेखि व्यस्त रहन्छ यो बेला सिजनमा।
नेपालभाषा, स्थानीय पाठ्यक्रम
२०७८ साउन २८, बिहिबार २०७८ साउन २८, बिहिबार by पत्र पत्रिका
आजको मूल्यमा एउटा ‘गोल्ड मेडल’लाई पगाल्यो भने कति मूल्यको हुन्छ ?
सीएनएन । खेलाडीहरु यतिबेला टोकियो २०२० ओलम्पिक्समा आफ्नो नाम इतिहासमा लेखाउन र साथै आफूसँग एउटा भए पनि ओलम्पिक मेडल घर ल्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । चाहे त्यो गोल्ड, सिल्भर होस् या ब्रोन्ज, ओलम्पिक मेडल भन्नासाथ सबै खोलाडीका लागि यो अत्यन्तै अमूल्य सम्पदा मानिन्छ । बेलायतकी पूर्व खेलाडी केली सोथरटनले २००४ र २००८ को ओलम्पिकमा दुईवटा […]
२०७८ साउन २४, आइतबार २०७८ साउन २४, आइतबार by पत्र पत्रिका
काठमाडौं, २० साउन । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त १६५ मिलियन डलर अर्थात् करिब १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ । एडीबीबाट प्राप्त करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकारमंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री […]
२०७८ साउन २०, बुधबार २०७८ साउन २०, बुधबार by पत्र पत्रिका